Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeNauru Breaking » Akukho khenketho, akukho COVID, kodwa simahla ekugqibeleni: IRiphabhlikhi yaseNauru
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeNauru Breaking • iindaba • abantu • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Azikho iindawo ezininzi ezishiyekileyo kulo mhlaba, apho i-COVID ingekabikho ngxaki, kwaye i-COVID yasimahla. Enye yiRiphabhlikhi yaseSiqithi yaseNauru.
UNauru uhlala engabalulekanga kukhenketho lwamanye amazwe.
INauru sisiqithi esincinci nelizwe elizimeleyo emantla mpuma e-Australia. Ime kwiikhilomitha ezingama-42 kumazantsi eikhweyitha.Ingqaqa lekorale lijikeleze isiqithi sonke esinamachaphaza amnyama ..
Abemi-malunga ne-10,000 1,000 kubandakanywa nabangengabo abemi baseNauru. XNUMX
Akukho matyala e-Coronavirus kweli lizwe, kodwa urhulumente wase-US ucebisa ukuba ugonywe xa usiya eNauru
Xa ujonga izibalo zehlabathi kwiCoronavirus, ilizwe elinye elizimeleyo lihlala lilahlekile. Eli lizwe yiRiphabhlikhi yaseNauru. INauru yiriphabliki yesiqithi kuLwandlekazi lwePasifiki yoMzantsi
Abantu baseNauru banezizwe ezili-12, njengoko zifanekiselwa yinkwenkwezi ene-12 kwiflegi yaseNauru, kwaye kukholelwa ukuba ngumxube weMicronesian, Polynesian, kunye neMelanesian. Ulwimi lwabo lweenkobe sisiNauruan kodwa isiNgesi sithethwa ngokubanzi njengoko sisetyenziselwa urhulumente kunye neenjongo zorhwebo. Isizwe ngasinye sinenkosi yaso.
Iflegi yaseNauru ilula kakhulu kwaye icacile, inemibala eluhlaza okwesibhakabhaka, omthubi kunye nomhlophe. Umbala ngamnye ubalulekile. I-Blue Blue imele ulwandle olujikeleze iNauru. Umgca otyheli uphakathi kweIkhweyitha kuba uNauru ulapha ecaleni kweIkhweyitha yiyo loo nto uNauru eshushu kakhulu. Inkwenkwezi emhlophe e-12 emhlophe imele izizwe ezili-12 zaBantu baseNauru.
Kungenxa yoko le nto iflegi yaseNauruan ibhalwe ngolu hlobo.
Ukuqala kwakhona kwemigodi ye-phosphate kunye nokuthumela kwelinye ilizwe ngo-2005 kunike uqoqosho lukaNauru amandla afunekayo. Iidipozithi zesekondari ze-phosphate zinobomi obuqikelelweyo malunga neminyaka engama-30.
Idiphozithi etyebileyo ye-phosphate yafunyanwa ngo-1900 kwaye ngo-1907 i-Pacific Phosphate Company yathumela ngenqanawa yokuqala i-phosphate e-Australia. Kude kube namhlanje umgodi we-phosphate usahleli ungowona mthombo uphambili wengeniso yezoqoqosho.
Umhla wamashumi amathathu ananye kuJanuwari lusuku lweNkululeko (Buya kwisikhumbuzo seTruk)
Olu suku lukazwelonke lubhiyozelwa ngurhulumente, ngokuququzelela imidlalo kunye nokhuphiswano lweekwayala zamasebe ngamasebe karhulumente nezixhobo. Kukwakho isidlo esenzelwe iintliziyo zabaselula. (Uninzi lwabo bangamaxhoba eTruk)
Umhla we-17 kuCanzibe lusuku loMgaqo-siseko
Olu suku lubhiyozelwa sisiqithi sonke esinomkhondo kunye nokhuphiswano lwentsimi phakathi kwezithili ezi-5.
I-1 kaJulayi yi-NPC / RONPhos Handover
I-Nauru Phosphate Corporation yathatha imigodi ye-phosphate kunye nokuthumela izinto eNauru emva kokuyithenga kwiKhomishini yeBritish Phosphate. Emva koko iRONPhos yathatha indawo kwi-NPC ngo-2008.
Nge-26 ka-Okthobha lusuku lwe-ANGAM
U-Angam uthetha ukubuyela ekhaya. Olu suku lukazwelonke lukhumbuza ukubuya kwabantu baseNauruan esiphelweni sokuphela. Uluntu ngalunye luhlala luququzelela imibhiyozo yalo njengoko olu suku luhlala lubhiyozelwa nosapho kunye nabantu obathandayo.
Xa umntwana ezelwe uya kuba lilifa lesizwe sakhe kwicala likanina. Impahla yesizwe ngasinye yahlukile enceda ekuchongeni umntu ngamnye.
Uluhlu lwezizwe ezili-12 zaseNauru:
I-Eamwit-inyoka / i-eel, ubuqili, ukutyibilika, ukulunga nokuxopa izitayile.
I-Eamwitmwit - iqakamba / izinambuzane, intle intle, ubumdaka, nengxolo ekhwankqisayo kunye nendlela efanayo.
I-Eaoru - umonakalisi, wenzakalisa izicwangciso, uhlobo lomona.
I-Eamwidara - uhlabamanzi.
Iruwa - umfokazi, owasemzini, umntu ovela kwamanye amazwe, okrelekrele, mhle, ubudoda.
U-Eano-uthe tye, uphambene, unomdla.
Iwi - iintwala (ezingasekhoyo).
Irutsi - ubuthathaka (ziphele).
UDeiboe- yintlanzi encinci emnyama, i-moody, i-cheater, indlela yokuziphatha inokutshintsha nangaliphi na ixesha.
Ranibok - into ehlanjwe elunxwemeni.
U-Emea-umsebenzisi we-rake, ikhoboka, impilo, iinwele ezintle, ukukopela kubuhlobo.
Emangum - umdlali, umdlali weqonga
Kuzo zonke izicelo ze-visa kubandakanya nokutyelela abasebenzi beendaba, isicelo se-imeyile sokungena eNauru kufuneka sithunyelwe eNauru Immigration.
Iidola zase-Australia yithenda esemthethweni eNauru. Ukutshintshiselana kwamanye amazwe kuyo nayiphi na indawo yokuphuma kuya kuba nzima. Imali kuphela kwendlela yokuhlawula eNauru.
Amakhadi etyala / etyala awamkelwa.
Zimbini iihotele, ezikaRhulumente kunye neehotele ezinosapho.
Zimbini ezinye iindlela zokuhlala (uhlobo lweyunithi) ezizezabucala.
Ihlala ihlobo eNauru, ngokubanzi ijikeleze ii-20s eziphakathi- phakathi kwe-30s. Impahla zasehlotyeni ziyacetyiswa.
Impahla zasehlotyeni / ukunxiba nje kwamkelekile kuyamkeleka kodwa ukuba ukwenza amadinga namagosa kaRhulumente okanye ukuya kwiinkonzo zecawe, kuyacetyiswa ukuba unxibe ngokufanelekileyo. Izidada aziyonto iqhelekileyo eNauru, iindadi zinokunxiba isarong phezu kwazo okanye iibhulukhwe ezimfutshane.
Akukho zithuthi zikawonkewonke. Kucetyiswa ukuqesha imoto.
Imithi yeziqhamo yikhokhonathi, imango, ipawupaw, ikalika, isonka esinezonka, isopu emuncu, ipandanus. Umthi onzima wemveli ngumthi we-tomano.
Kukho iintlobo ngeentlobo zemithi yeentyatyambo / izityalo kodwa ezona zisetyenziswa kakhulu / ezithandwayo yi-franjipani, iud, hibiscus, irimone (jasmine), eaquañeiy (evela kumthi we-tomano), i-emet kunye neentsimbi ezityheli.
Abantu baseNauru batya iintlobo ngeentlobo zokutya kwaselwandle kodwa iintlanzi isekukutya okuthandwayo ngabantu baseNauru - eluhlaza, eyomileyo, ephekiweyo.
Akukho tyala laziwa nge-COVID-19 kwiNauru, akukho ngxelo zenziweyo kuMbutho wezeMpilo weHlabathi, kodwa uRhulumente wase-US ucebisa ummi wawo ukuba le meko ingaziwayo iyingozi, nokuba ngabahambi abagonywe ngokupheleleyo
Kukho iimvavanyo ze-PCR kunye / okanye ze-antigen ezikhoyo kwiNauru, iziphumo zithembekile kwaye kwiiyure ezingama-72.
Ugonyo lwe-Oxford-Astra Zeneca luyafumaneka kweli lizwe
UNauru unebali lesizwe:
Kudala-dala, kwakukho indoda egama linguDenunengawongo. Wayehlala phantsi kolwandle kunye nenkosikazi yakhe, uEiduwongo. Babenonyana ogama linguMadaradar. Ngenye imini, utata wakhe wamsa emanzini. Apho wahambela kude de waya kufika kunxweme lwesiqithi, apho wafunyanwa yintombazana entle egama linguEigeruguba.
U-Eigeruguba wamthatha wamsa ekhaya, emva koko bobabini batshata. Babenoonyana abane. Omdala wayebizwa ngokuba ngu-Aduwgugina, owesibini u-Duwario, owesithathu u-Aduwarage kunye nomncinci kwathiwa ngu-Aduwogonogon. Xa la makhwenkwe akhula engamadoda, aba ngabalobi abakhulu. Xa babe ngamadoda, bahlala bodwa ngaphandle kwabazali babo. Emva kweminyaka emininzi, xa abazali babebadala, umama wabo waba nenye inkwenkwe. Wayebizwa ngokuba nguDetora. Njengokuba wayekhula, wayekuthanda ukuhlala nabazali bakhe kwaye eve oko bakuxelelweyo. Ngenye imini, xa waphantse wakhula waba yindoda, wayephumile ehamba xa wabona isikhephe. Waya kubo, bamnika ezona ntlanzi zincinci. Wagoduka nayo, wanika. Ngosuku olulandelayo, wenza kwa into enye kodwa, ngosuku lwesithathu, abazali bakhe bamxelela ukuba ayokuloba nabantakwabo. Wahamba ke nabo ngephenyane labo. Ukubuya kwabo ngorhatya, abazalwana banika uDetora eyona ntlanzi incinci. UDetora wagoduka waya kuxelela utata wakhe ngale nto. Emva koko utata wakhe wamfundisa ukuloba, wamxelela nangotatomkhulu notatomkhulu wakhe, ababehlala phantsi kolwandle. Wamxelela ukuba, nanini na umgca wakhe unamathela, kufuneka awungene. Kwaye xa efika kwikhaya lotatomkhulu nomakhulu wakhe, kufuneka angene acele utatomkhulu wakhe ukuba amnike amagwegwe awayenawo emlonyeni wakhe; kwaye kufuneka angavumi naziphi na ezinye iintambo zokubopha ebezinikelwe kuye.
Ngosuku olulandelayo, uDetora wavuka kwakusasa kakhulu waya kubantakwabo. Bamnika intambo yokuloba enamaqhina amaninzi kuyo, kunye nesiqwenga sentonga ethe tye yokuloba. Phandle elwandle, bonke baphosa imigca yabo ngaphakathi, kwaye, amaxesha ngamaxesha, abazalwana babebamba intlanzi; kodwa uDetora akazange abambe nto. Ekugqibeleni, wayediniwe kwaye umgca wakhe wabanjiswa elityeni. Waxelela abantakwabo ngale nto, kodwa bamqhula. Ekugqibeleni, waziphosa ngaphakathi. Njengoko wayesenza oko, bathi ngaphakathi kwabo, 'Uyintoni na umntu osisiyatha, lo mzalwana wethu!' Emva kokuntywila, uDetora wafika kwikhaya lotatomkhulu notatomkhulu wakhe. Bamangaliswa kakhulu kukubona inkwenkwana enjalo isiza ekhayeni labo.
'Ungubani?' Babuza. 'NdinguDetora, unyana kaMadaradar kunye no-Eigeruguba' utshilo. Xa beva amagama abazali bakhe, bamamkela. Bambuza imibuzo eliqela, kwaye bambonisa ububele obukhulu. Ekugqibeleni, wathi xa eza kuhamba, ekhumbula into awayeyixelelwe nguyise, wacela kuyisemkhulu ukuba amnike umlobothi wakhe. Utatomkhulu wakhe wamxelela ukuba athathe naziphi na iihuku azithandayo kuphahla lwendlu.
INauru ayi-COVID-yasimahla. Ukubhabha ngeveki phakathi kweNauru kunye neBrisbane, e-Australia kuyaqhubeka nokusebenza. Bonke abahamba besiya eNauru bafuna imvume kwangaphambili kuRhulumente waseNauru.
Amadoda akwaDamo aphosa kwimigca yawo kwakhona, kwaye ngeli xesha abamba uhlobo olwahlukileyo lweentlanzi. 'Ngubani igama lalowo?' Babuza. UDetora waphendula wathi, 'Eapae!' Kwakhona igama lalilelilo. Oku kwabacaphukisa abalobi baseDamo. Iibhulorho zikaDetora zamangaliswa bubukrelekrele bakhe. UDetora ngoku waphosa ulayini wakhe watsala intlanzi. Wabuza kumadoda akwaDamo igama lawo. Baphendula bathi 'Irum' kodwa xa bejonga kwakhona, bafumanisa ukuba bayaphazama, kuba kwakukho umgca omnyama ekupheleni komgca. Waphinda uDetora waphosa emgceni wakhe waphinda wababuza ukuba babize intlanzi. 'Eapae,' batsho. Kodwa xa bejonga bafumanisa ibhasikithi yehagu ekupheleni komgca kaDetora.
Ngoku amadoda akwaDamo ayesoyika kakhulu, kuba aqonda ukuba uDetora wayesebenzisa imilingo.
Iphenyane likaDetora latsalelwa ecaleni kwelinye, kwaye yena nabantakwabo babulala amadoda akwaDamo bathatha zonke izixhobo zabo zokuloba. Xa abantu elunxwemeni bakubona konke oku, bayazi ukuba amadoda abo oyisiwe kukhuphiswano lokuloba, kuba yayisisithethe ngaloo mihla ukuba abo baphumeleleyo kukhuphiswano lokuloba babulale abo babachasayo kwaye bathathe nezixhobo zokuloba. Baphinda bathumela elinye iphenyane. Kwenzeka into efanayo njengangaphambili, kwaye abantu baseDamo boyika kakhulu kwaye babaleka elunxwemeni. Emva koko uDetora nabantakwabo batsalela iphenyane labo elunxwemeni. Ukufika kwabo elityeni, uDetora waphosa iphenyane kunye nabantakwabo abane ngaphantsi; Iphenyane lajika laba lilitye. UDetora uzimele yedwa kwesi siqithi. Kungekudala, wadibana nendoda eyamcela umngeni kukhuphiswano lokuloba iintlanzi kunye nentlanzi engxondorheni. Bayibona enye kwaye bobabini baqala ukuyileqa. UDetora waphumelela ekubambeni, emva koko wabulala enye indoda wahamba. Kude ngakumbi elunxwemeni, uDetora waphumelela ukhuphiswano, wabulala umceli mngeni wakhe.
UDetora ngoku wajonga esi siqithi. Uthe akulamba, wakhwela kumthi wekhokhonathi wawisa amandongomane avuthiweyo, ubisi awasela ngalo. Ngamakhoba ekhokhonathi, wenza imililo emithathu. Xa umlilo uvutha ngokuqaqambileyo, waphosa inyama yecoconut kuyo, kwaye oku kwenza ivumba elimnandi. Emva koko walala esantini kwiiyadi ezimbalwa kude nomlilo. Wayesele elele xa wabona impuku engwevu isondela emlilweni. Itye ikhokhonathi kwimililo emibini yokuqala kwaye, kanye xa yayiza kutya icoconut yomlilo wesithathu, uDetora wayibamba kwaye wayeza kuyibulala. Kodwa impuku encinci yacela uDetora ukuba angayixheli. 'Ndicela undiyeke, kwaye ndiza kukuxelela into' yatsho. UDetora wakhupha imouse, eyaqala ukubaleka ngaphandle kokugcina isithembiso sayo. UDetora wayibamba kwakhona imouse, kwaye ichola intonga encinci ebukhali, isoyikisa ngokugqobhoza amehlo empuku ngayo. Impuku yoyika yaza yathi, 'Qengqela ilitye elincinci lisuke phezu kwelo litye likhulu uze ubone ukuba uza kufumanisa ntoni'. UDetora waliqengqa ilitye walifumana indlela ekhokelela ngaphantsi komhlaba. Ukungena emngxunyeni, wahamba ngendlela emxinwa de wafika kwindlela enabantu abahamba besihla benyuka.
UDetora wayengaluva ulwimi abathetha ngalo. Ekugqibeleni wafumanisa kumfana oselula owayethetha ulwimi lwakhe, kuye uDetora wabalisa ibali lakhe. Umfana wamlumkisa ngokuchasene neengozi ezininzi zomhlaba omtsha, kwaye wamalathisa endleleni yakhe. UDetora wafika ekugqibeleni kwindawo apho wabona iqonga eligutyungelwe ngeemethi ezintle zoyilo oluhle. Eqongeni kwakuhleli iNdlovukazi yeLouse, kunye nabakhonzi bayo ngeenxa zonke.
Ukumkanikazi wamkela uDetora, kwaye wamthanda. Xa, emva kweeveki ezimbalwa, uDetora wayenqwenela ukubuyela ekhaya, iLouse-Queen ayizange imvumele ukuba ahambe. Kodwa, ekugqibeleni, xa wamxelela ngabantakwabo abane phantsi kwelitye ababengenakukhululwa ngaphandle komlingo wakhe, wamvumela ukuba aqhubeke. Inani labantu awadibana nalo lalifuna ukwenzakalisa umntu ongamaziyo, kodwa uDetora waboyisa bonke ngomlingo.
Ekugqibeleni beza eliweni apho uDetora wayebashiye khona abantakwabo. Wathoba phantsi, waphinda umlingo, kwaye ilitye elikhulu latshintsha laba likhephe elinabantakwabo abane. Bobabini abazalwana bahamba ngolwandle ukuya kwilizwe labo.
Emva kweentsuku ezininzi elwandle, basibona isiqithi sasekhaya mgama. Njengoko babesondela kuyo, uDetora waxelela abazalwana ukuba uzobashiya kwaye aye kuhlala noomawokhulu babo emazantsi olwandle. Bazama ukumcenga ukuba ahlale nabo, kodwa watsibela ecaleni kwephenyane, wehla ke. Abazalwana baya kubazali babo babalisa ngeziganeko zabo.
Ukufika kukaDetora kwikhaya lotatomkhulu notamkhulu, bamamkela ngezandla ezishushu. Emva kokusweleka kotatomkhulu, uDetora waba yinkosi yoLwandle kunye noMoya oMkhulu wokuLoba kunye nabalobi. Kwaye kule mihla, naphi na xa imigca yokuloba okanye amagwegwe elahlekile ngephenyane, kuyaziwa ukuba balele kuphahla lwendlu kaDetora.